Iintlobo zeMpawu zihlala zingancinci - ii-Geofumadas
Iintlobo zeMpawu zihlala zingabizi
Matshi, 2008 ArcGIS-ESRI, GIS asibonise
Nazi ezinye izigqibo endizifumene malunga nesicwangciso esetyenziswayo asibonise ukuhlala kwixabiso elincinci, ungakhankanyi ngokunyaniseka malunga nokuba nakho kwayo. Inyaniso kukuba ishishini lobugcisa
Abayinikezeli incwadi, le ncwadana yedijithali ... baxela ukuba ngenxa yokuguqulwa kwehlabathi lezobuchwepheshe, ukwenza incwadana enobungqina ekushicileleni kuyingozi yaye abafuni ukufaka ingozi kwi $ dollar 50 ukuze le ncwadana ingabongeza kwixabiso lokugqibela. Incwadana yabo yesiganeko idibanisa into abajongene nayo, inencwadana ye-intanethi kwaye ... xa umntu efuna, banokuprinta amakhasi e-3,400 yedijithali.
Abanikeli ibhokisi, xa uthenga intanethi, bathumela u ri karhi u ukukhuphela imveliso uze uthumele izitshixo software mvume. Bathi, ukuba ikwi 'ibhokisi kunye disks ngaphakathi, kunye nokuthunyelwa kungathetha lula $ 45 kunye neendleko emikhombeni, cinga ihlabathi unobuchule namhlanje ayiphephe ... ah, ukuba ufuna i DVD, ezipakishwe yayo iindleko disk original $ 11 kunye nokuhanjiswa iindleko. Yinto funny ukuba kuza isikhokelo starter eye amanyathelo amathathu: 1. Faka, 2. Qalisa, i-3. Funda
Abanayo abahambisa, ungathenga kuphela kwi-intanethi. Oko bakunikayo kukuqinisekisa ngeentsuku ze-30 xa bengabuyisela imali yakho xa ungenelisekanga ngemveliso. Kodwa abanalo abathengisi behlabathi jikelele, bebhikisana ukuba ngoku ngoku kwandisa ixabiso le-50% yomkhiqizo ngothutho lomthengisi kunye neerhafu zelizwe ngalinye. Oku kunciphisa uqeqesho kwaye kusinika amathuba esinokukuxhasa kunye nokuphunyezwa.
Abenayo inkonzo yenkxaso yesiqheloXa uthenga mvume, unelungelo imibuzo emibini inkxaso esemthethweni ngoko ke kufuneka uthathe unonophelo njengoko iminqweno ubungqondi Aladdin. Emva oku, wena uhlawule umbuzo ngamnye, ngoko kukho amaqonga umsebenzisi ukunceda abanye, yaye blogs elinje ukuba banike iingcebiso free :). Ukuza kuthi ga ngoku mna mba imibuzo yam xa uthenge ilayisenisi kodwa olunywe yinyoka ngamandla kundibuza iva izinto eziziziqalelo ezifana: Que onda kunye V8 iinguqulelo DGN yaye kamva kunyaka dwg 2005.
Musa ukukhupha iilayisenisi yonke indawo, xa kuphuma inguqulelo entsha bayakukhuthaza ukufuduka kwe-$ 50 ukuze bangacingi malunga nabasebenzisi abahlala kwiinguqulelo ze-3 ezedlule.
Musa ukukrexeza nabani na, ngoko abayithengi uphuhliso lwentathu xa bekwazi ukwenza ngokwabo, bengatshatanga bonke abantu, i-IIS ewe, i-RedHat ayiyi ...
Makhe songeze xa kusenokufuneka ke ngoko ukuba i-Manifold inikwe yonke i-miquis:
I-Minimum Personal Version $ 245.00
Incwadi eprintiweyo kunye nekhokelo yomsebenzisi $ 55.00
Ibhokisi lokupakisha, idiski yasekuqaleni $ 45.00
Ikhomishini ye-400.00 yokuthengisa umthengisi
Inkxaso ye-$ 110.00
Inkxaso yenkonzo yeemvume zamandulo $ 55.00
Iirhafu zengingqi $ 125.00
I-Customs kunye neendleko zokuthumela i-$ 45.00
Ngaphezulu kweendleko zoMfanekiso weCandelo 370.00
Iyonke ................................................ .. $ 1,450.00
Ngethuba, akunjalo ukuba ixabiso leDeskithophu ye-ArcGIS?
Blog Dgn Dwg GIS asibonise
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GIS eninzi, isishwankathelo sezona zinto zilungileyo
Post Next Uvuyo usuku lwe πOkulandelayo "